योग के हो ? यसका प्रकार र फाइदा - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ वैकल्पिक चिकित्सा ∕ योग के हो ? यसका प्रकार र फाइदा
हेल्थ आवाज मंगलबार, २०७९ असार ७ गते, ०५:०० मा प्रकाशित
आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइदै छ । यो दिवसको उद्देश्य मानिसलाई योगप्रति सचेत गराउनु हो । अहिलेको बदलिँदो जीवनशैलीका कारण उत्पन्न हुने विभिन्न शारीरिक रोग तथा मानसिक रोगको समाधान गर्ने विकल्पका लागि योग अत्यन्तै प्रभावकारी मानिन्छ ।
दिनप्रतिदिन योगको लोकप्रियता बढ्दै गएको पाइन्छ । योगा जुनसुकै उमेरवर्गले पनि गर्न सक्छन् । चिकित्सकहरु पनि कतिपय स्वास्थ्य समस्याको समाधान योग पनि रहेको भन्दै सुझाउने गरेका छन् । योगका महत्वबारे धेरै ठाउँमा कार्यक्रमहरु बेलाबखतमा भैरहेका हुन्छन .
योग संस्कृत भाषा ‘युज’ बाट आएको हो जसको अर्थ ईश्वरसँग आत्माको मिलन हो। अर्थात् योगमा यति धेरै शक्ति छ कि यसले अमरत्व प्राप्त गर्न सक्छ। कतिपय मानिसहरूले योगलाई सरल सरल ठान्छन्। तर, यो त्योभन्दा धेरै हो। योग मुख्यतः एक आध्यात्मिक अनुशासन हो, जसमा जीवन शैलीको पूर्ण सार आत्मसात गरिएको छ।
योग कला पनि हो, विज्ञान पनि हो । यो एक विज्ञान हो, किनकि यसले शरीर र दिमागलाई नियन्त्रण गर्ने व्यावहारिक तरिकाहरू प्रदान गर्दछ। गहिरो ध्यान सम्भव बनाउँछ। र, यो एक कला हो, जबसम्म यसलाई सहज र संवेदनशील रूपमा अभ्यास गरिएको छैन। यसले सतही परिणाम मात्र दिन्छ। योग विश्वासको प्रणाली मात्र होइन, यसले शरीर र मनको एकअर्कामा हुने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर आपसी सद्भावमा ल्याउँछ।
योगा धेरै प्रकारका हुन्छन। योगका प्रकार:- १.राजयोग, २.हठयोग, ३.लययोग, ४. ज्ञानयोग, ५.कर्मयोग र ६. भक्तियोग। यसका साथै बहिरंग योग, नाद योग, मन्त्र योग, तन्त्र योग, कुण्डलिनी योग, साधना योग, क्रिया योग, सहज योग, मुद्रायोग, र स्वरयोग आदि योगका अनेक आयामहरूकाे चर्चा गरिन्छ तर यी सबै याेगहरू माथि उल्लिखित छ प्रकारमा नै समाहित छन्। हामीले आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्न धेरै किसिममा प्राणायाम र योगासनहरु गर्न सक्छौं। जसले हामीलाई शारीरिक र मानसिक दुवैरुपमा बलियो बनाउँछ।
१. स्थायी योग
२. बसेर गर्ने योग
३. पेट योगाको मुद्रा
४ . पीठको बलमा बसेर गर्ने योग
मांसपेशी बलियो बनाउँछ।
जोर्नीहरुलाई स्वस्थ र बलियो बनाउँछ।
मेरुदण्डको रक्षा गर्दछ।
तपाईंको रक्त प्रवाह बढाउँछ।
आफ्नो प्रतिरक्षा बढाउँछ।
मुटुको गतिलाई नियन्त्रण गर्छ।
तपाईंको रक्तचाप कम गर्छ।
तपाईलाई खुसी बनाउँछ।
एक स्वस्थ जीवन शैली प्रदान गर्दछ।
ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्दछ।
रक्तचाप कम गर्छ।
तपाइको प्रणालीलाई आराम दिलाउँछ।
सन्तुलनमा सुधार गर्दछ।
तपाईंको स्नायु प्रणाली कायम राख्छ।
अंगहरूमा तनाव कम गर्दछ।
गहिरो निन्द्रामा सुत्न मद्दत गर्छ।
आफ्नो आत्मसम्मान बढाउँछ।
तिम्रो पीडा हटाउँछ।
मनको शक्ति दिन्छ ।